Umahluko phakathi kokuvavanywa kokusebenza kunye nokuvavanywa komthwalo
Eyona Ukusebenza Umahluko phakathi koVavanyo lweNtsebenzo kunye noVavanyo loMthwalo
Nguwuphi umahluko phakathi kovavanyo lwentsebenzo, uvavanyo lomthwalo, kunye novavanyo loxinzelelo?
Ukuvavanywa kokuSebenza kwamanyathelo okuphendula kwesicelo kunye nenani elilindelekileyo labasebenzisi. Injongo yoku kukufumana isiseko kunye nokubonisa indlela isicelo esiziphatha ngayo phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Ngaba iyahlangabezana nexesha elifunekayo lokuphendula?
Ukuvavanywa komthwalo kukulinganisa ixesha lokuphendula xa isicelo siphantsi kwenani eliqhelekileyo labasebenzisi.
Ixesha lokuphendula liza kunyuka, okt isicelo siza kuhamba kancinci phantsi komthwalo onzima, kodwa injongo yokuvavanywa komthwalo kukubona ukuba ngaba isicelo sinokuwugcina umthwalo owandisiweyo kwiseva okanye siza kuphazamiseka kwaye sibulale iiseva.
Ukuvavanywa komthwalo kuhlala kuqalwa njengamanani asezantsi kwaye ngokuthe ngcembe kunyuke ngaphezulu kwexesha elinikiweyo kude kufike kumthwalo ofunwayo kwinkqubo emva koko kuyehla.
Ukuvavanywa koxinzelelo okanye ukuvavanya
Ukuvavanywa koxinzelelo okanye ukuVavanya ukuCwina kufana nokuvavanywa komthwalo kodwa siqala kwakhona umthwalo kwiserver ixesha elide, yithi iyure e-1.
Injongo yokuvavanywa koxinzelelo kukuqinisekisa ukuba phantsi komthwalo osisigxina ixesha elide, iiseva aziphazami, nangona ziphendula kancinci.
Uvavanyo loxinzelelo luqala ngokufana nokuvavanywa komthwalo, o.k.t. ngokuthe chu sonyusa umthwalo kwiiseva, kodwa nje ukuba lo mthwalo ufikelelwe, siqala kwakhona umthwalo ofanayo kwiseva ixesha elinikiweyo kwaye silinganise amaxesha okuphendula.
Ukuba siqhubeka sonyusa umthwalo kwiseva, kuza inqaku xa iserver ingakwazi ukuphatha ezinye izicelo kwaye iphazamise, uninzi luqala ukunika impazamo ikhowudi yokuphendula eyi-500.
Nje ukuba oku kwenzeke, sifumana isibonakaliso somthamo wesicelo, okt bangaphi abasebenzisi abanokusingatha isicelo.
Eyona nto ithengwayo iflaya emnyama ngolwesiHlanu 2017
I-s21 vs iphone 12 pro
Fumana zonke iikhowudi zeenkwenkwezi kunye neenkonzo zokuzinika iinkonzo ezimfutshane zeVerizon, AT & T, T-Mobile, kunye neefowuni zeSprint kanye apha!
Ukusingathwa kweFayile yePython